ब्राजिलियन जहाज सार्कको माउन्टेन फ्लाइट, व्यवसायिक सम्झौता कोसँग हुँदैछ? :: BIZMANDU
प्रकाशित मिति: Oct 8, 2018 5:08 PM
काठमाडौं। ब्राजिलियन जेट विमान निर्माता कम्पनी एम्ब्रेररले सोमबार 'डेमोन्स्ट्रेसन फ्लाइट' गरेको छ। 'प्रोफिट हन्टर' नाम दिइएको एक सय १४ जना यात्रु क्षमता रहेको 'सार्क' इ१९०-इ२ सिरिजको जहाजले सोमबार दिउँसो १२ बजे माउन्टेन फ्लाइट गरेको थियो।
'इ१९०-इ२मा उडान गर्ने यात्रुहरु जहाजमा भएको एभियोनिक्स (जहाजमा जडान गरिएको विद्युतीय उपकरण), स्लिक र मोडर्न इन्टेरियर र लो क्याविन नोइजलगायत विशेषता रहेको कारणले यात्रुहरु जहाजबाट प्रेरित हुनेछन्। अरु जहाजको तुलनामा यात्रुले इ१९०-इ२ मा कम मूल्यमा यात्रा गर्न सक्नेछन्,' एसिया प्यासिफीकअन्तर्गत एम्ब्रेररएभिएसन युनिटका उपाध्यक्ष केसर पेरैराले भने।
जहाजमा तीन हजार पाँच सय किलोको भार थेग्न सक्ने क्षमता रहेको छ। जहाजमा भएको नयाँ किसिमको इन्जिन, विङ्स(पखेटा) र 'फोर्थ जेनेरेशन फ्लाइ बाइ वाइरको कारणले कुल १७.३ प्रतिशत इन्धन खपत गर्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ।
'इम्ब्रेरर' व्यवसायिक विमान उत्पादक कम्पनी हो। ब्राजिलमा रहेको कम्पनी सन् १९६९ देखि संचालनमा आएको हो। हालसम्म आठ हजार भन्दा बढी जहाज बिक्री गरिसकेको र विश्वभर १४ करोड भन्दा बढी यात्रुहरुलाई सेवा दिइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
ब्राजिलियन जहाज सार्कको माउन्टेन फ्लाइट, व्यवसायिक सम्झौता कोसँग हुँदैछ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।